Nanentana farany omaly ny filohan’ity fikambanana ity, Lalaina Razafindralambo fa tsy hetsika politika ity fa sosialy ka manasa ireo mahatsapa fa mila ampidinina ny vidin-tsolika sy ny vidim-piainana, hoy izy, hiara-kilahatra aminay. Efa azo ny alalana ary tsy mandeha irery izahay fa ho avy eo koa ny mpiaro ny zon’ny mpanjifa na RNDC sy ny mpitatitra. Vao niakatra ny vidin-tsolika dia 400 ariary izao ny iray amin’ny voatabia. 550 ka hatramin’ny 650 ariary ny iray amin’ny atody. “Azo ekena ve ?”, hoy izy.